Monday February 11, 2019 - 19:56:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Batric Shanhan oo ah sii haya xilka wasiirka difaaca dowladda kirishtanka Mareykanka ayaa booqasho dhuumasho ah ku tagay saldhig melleteri oo kuyaal magaalada Kaabuul ee caasimadda wadanka Afghanistan
isagoo diyaarad dusheed kula hadlayay saxafiyiin ku wehlinaya socdaalkiisa dhuumashada ah ayuu sheegay in ujeedkiisu yahay sidii xukuumadda dabadhilifka Kaabuul ay uga dhageysan lahaayeen aragtideeda ku aaddan qorshaha cusub ee Mareykanku ku wajahayo Afghanistan oo ah in uu ciidamadiisa kalasoo baxo.
wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka waxa ay hadda ka shaqeynaysa ay tahay sidii qaab amni ah uga bixi laheyd wadanka Afghanistan muhiimna ay tahay in ay dhageystaan talooyinka uga imaanaya dhanka xukuumadda Ashraf ghani oo ah madaxweynaha dabadhilifka xukuumadda kaabuul.
Socdaalka sii haya wasiirka difaaca xukuumadda washinton ayaa imaanaya xilli Donald Trump uu bishii lasoo dhaafay sheegay in todobo kun oo kamid ah ciidamadooda ku sugan Afghanistan ay labixi doonaan bilaha soo socda.
Dowladda Kenya oo Mareykanka uga cabatay Weerarada Al Shabaab.
Mareykanka oo bil gudaheed Afghanistan ka fuliyay 1113 Duqeyn.
Mareykanka Oo sheegay in Weerar ka dhacay Suuriya uu ku dilay Hoggaamiyihii Ururka Daacish.
Mareykanka: Waxaan Farmaajo u sheegnay in uu ka haro dacwadda badda.